Ihe ị ga-eme na Isla de Lobos, ihe ịtụnanya dị na Canary Islands | Akụkọ njem
Louis Martinez | | Getaways, Islands
Kedu ihe ị ga-eme na Isla de Lobos? Tupu ịza ajụjụ a, ọ dị mkpa ka anyị gwa gị gbasara ebe ọmarịcha ebe ahụ dị. Ọ dị naanị kilomita abụọ site na Canary Island nke Fuerteventura na naanị asatọ si Lanzarote.
Ọ na-esiri ike ekpuchi mpaghara nke square kilomita isii ma gbara ya gburugburu iri na anọ nke ụsọ oké osimiri nwere nnukwu ọnụ ọnụ ugwu, ọmarịcha oghere na osimiri nke lava siri ike. Ọ dịkwa na Ọdịda nke Bocaina na ebe kachasị elu ya bụ Ndị Caldera, na naanị 127 mita n'ịdị elu. Mana, na-enweghị mmasị ọzọ, ka anyị gosi gị ihe ị ga-eme na Isla de Lobos.
1 Ihe ị ga-ahụ na ime na Isla de Lobos
1.1 Ụdị ihe ùgwù
1.2 Osimiri nwere amara pụrụ iche: El Puertito
1.3 Ebe ntụgharị asụsụ Isla de Lobos
1.4 Ọkụ lime na ite nnu ochie
1.5 Ụlọ ọkụ Punta Martiño, nleta ihe nnọchianya ime na Isla de Lobos
1.6 Ụlọ oriri na ọṅụṅụ Isla de Lobos
2 Ndụmọdụ maka njem gaa Isla de Lobos
Ihe ị ga-ahụ na ime na Isla de Lobos
Ụlọ ọkụ Punta Martiño na Isla de Lobos
Ebe anwansi a sitere n'aha ya n'ihi na, n'oge gara aga, ebe a bụ akara akara ndị mọnk, nke a na-akpọkwa. ọdụm oké osimiri. Akụkọ ya malitere n'oge ndị Rom. Ọmụmụ ihe ọhụrụ nke Universidad de La Laguna ha egosila na ndị Latinos guzobere ebe obibi n'àgwàetiti ahụ, ma ọ dịkarịa ala nwa oge, iji nweta agba odo odo.
Ka e mesịrị, ndị ohi na-eji ya mere ebe mgbaba na ebe ndị ọkụ azụ̀ ji azụ̀ azụ̀. Ugbua na 1865 na Houselọ ọkụ Punta Martiño, nke anyị ga-ekwu maka ya ma emechaa. N'ezie, ndị na-elekọta ụlọ ọkụ ga-abụ nanị ndị bi na ya site na mgbe ahụ gawa.
Otú ọ dị, e nwere ọtụtụ ọrụ a ga-arụ na Lobos bụ́ ndị a na-agaghị echefu echefu mgbe e kwupụtara àgwàetiti ahụ dị ka ogige ntụrụndụ eke na 1982. A kpọrọ ya. Park Park nke dunes nke Corralejo na Isla de Lobos na, na mgbakwunye, ekewapụtara ya dị ka Mpaghara Nchekwa Pụrụ Iche maka nnụnụ agbakwunyere n'ime Natura 2000 Network.
Mgbe mmeghe a dị mkpa gasịrị, anyị ga-eso gị gaa na Isla de Lobos. Anyị ga-amalite site na-agwa gị banyere ya eke ebube na mgbe ahụ banyere ya ncheta, nke nwekwara ha.
Ụdị ihe ùgwù
Nanị ụzọ ị ga-esi ruo Isla de Lobos bụ ụgbọ mmiri na-eme njem ọtụtụ ụbọchị site na ya Corralejo, na Fuerteventura. Ọ na-ewe naanị nkeji iri abụọ na ọnụ ahịa ya dị ihe dị ka euro iri na ise maka okenye. Na mgbakwunye, ị ga-arịọrịrị ikike n'aka Cabildo ụbọchị ole na ole tupu ịme njem ahụ.
Mgbe ị rutere n'àgwàetiti ahụ, ị ​​ga-ahụ ụlọ a na-edebe ihe ọmụma n'akụkụ ebe ị ga-ahụ ihe oyiyi na-echetara ọdụm oké osimiri ndị bi na ya n'oge gara aga. Ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ square kilomita isii nke oke ọhịa na ọdịdị dị egwu na-echere gị.
Ije ije n'ụzọ ya nwere akara nke ọma bụ otu n'ime ihe kacha mma ịme na Isla de Lobos. A na-amachikwa isi ihe kacha nwee mmasị. Buru n'uche na, ebe ọ bụ mpaghara echedoro, ị gaghị enwe ike isi n'ụzọ ndị a pụta.
Ụzọ kasị pụta ìhè na-amalite n'ebe ndịda nke àgwàetiti ahụ ma na-agafe n'ime ime ruo mgbe ọ ruru ihu n'ebe ugwu. Mana isi ihe dị na njegharị ahụ bụ La Caldera ugwu mgbawa, nke anyị kwubururịị nye gị na nke, na mgbawa ya, bụ mmalite nke Lobos. Ị nwere ike ịrị n'elu ma hụ ọmarịcha echiche nke Lanzarote na dunes nke Corralejo na ọ na-enye gị.
Ihe ịtụnanya okike ndị ọzọ pụtara ìhè nke ị nwere ike ịhụ na njem gị nke agwaetiti a bụ obodo ọjọọ nke ime na basin nke ọdọ mmiri. Ọ bụrụ na ị chetaghị, anyị na-akọwa na obodo ọjọọ bụ otu nkume mgbawa ugwu gbasasịrị ntakịrị nke a na-ahụ na mbara ala kpọrọ nkụ, ebe oghere bụ oghere sara mbara n'ime ala. N'ikpeazụ, ị nwekwara ike ịghọta jable nke Ụlọ kichin. N'aka nke ya, nke a bụ aha e nyere otu ájá mgbawa ugwu.
N'aka nke ọzọ, dịka anyị na-ekwu, Isla de Lobos bụ ebe nchekwa pụrụ iche maka nnụnụ. Otu n'ime ihe kachasị ukwuu na nke ị nwere ike ịhụ bụ akwa mmiri, akwa na petrel Bulwer. N'otu aka ahụ, e nwere endemic ụdị osisi n'àgwàetiti ahụ. Ọ bụ oku Lobos ebighebi.
Osimiri nwere amara pụrụ iche: El Puertito
Ụlọ ndị ọkụ azụ̀ dị na mpaghara Puertito
E nwere ọtụtụ osimiri na coves nke agwaetiti ahụ nwere na ịma mma ya ị ga-ahụ site n'ebe dị anya. N'ihi na ọ bụ naanị otu n'ime ha ka a na-enye ohere ịnweta n'efu. Ọ bụ maka Puerto Cove na mmiri ya doro anya zuru oke maka mmiri mmiri.
Ọgba mmiri a bụ ala dị ka nrọ. Ihe mejupụtara ya bụ ogwe aka ogologo nke ụwa mgbawa ugwu nke na-eke mmiri dị ọcha nke Atlantic na-emepụta ọdọ mmiri na-acha anụnụ anụnụ turquoise. Na mgbakwunye, n'akụkụ ya, ị nwere ike ịhụ ụlọ ndị ọkụ azụ ochie bụ nanị ụlọ dị n'àgwàetiti ahụ ma e wezụga ụlọ ọkụ nke anyị ga-ekwu maka ya ma emechaa.
El Puertito bụ ụdị ọdọ mmiri okike ma dị na ndịda agwaetiti ahụ. Ma hà dị oké ọnụ ahịa bụ La Concha ma ọ bụ La Caleta Beach, dị n'otu mpaghara ma buru ibu karị. Aja ya na-acha ọcha pụtara, ọ bụ ezie na o nwekwara nkume, na ọdịdị akpụkpọ ụkwụ ịnyịnya ya.
Ebe ntụgharị asụsụ Isla de Lobos
Anyị ekwuola na ị gafefe ụlọ ị ga-ahụ mgbe ị ga-esi n'ime ụgbọ mmiri ahụ pụta. Ọ na-edobe ebe ntụgharị okwu, ebe ị nwere obere ihe atụ nke ihe niile ị ga-ahụ na ebe anwansi a. Anyị na-akwado ka ị gaa na ya tupu ịmalite njem gị n'àgwàetiti ahụ.
Ọkụ lime na ite nnu ochie
Ụlọ ihe ọṅụṅụ lime na Isla de Lobos
A ka na-echekwa ihe ndị fọdụrụ n’okpokoro ochie bụ́ ebe a na-eme lime dị mkpa iji wuo ụlọ ndị ọkụ azụ̀ ndị anyị kwuru okwu ya n’agwaetiti ahụ. Ị nwekwara ike ịhụ obere ọnụ ụlọ nnu n'ebe e si amịpụta nnu iji chekwaa, kpọmkwem, azụ. N'aka nke ọzọ, nso n'elu, ị nwere ike ịhụ ebe ihe ochie abụọ nke bụ nke oge Jandiense na Erbanense.
Ụlọ ọkụ Punta Martiño, nleta ihe nnọchianya ime na Isla de Lobos
Ụlọ ọkụ Punta Martiño
Ihe ncheta kachasị n'àgwàetiti ahụ bụ ụlọ ọkụ Punta Martiño, nke ndị ọrụ Portuguese wuru na 1865. Ugbu a, ọ na-arụ ọrụ na-akpaghị aka, ya bụ, ọ nweghị onye na-elekọta ụlọ ọkụ. Otú ọ dị, dị ka ihe anecdote, anyị ga-agwa gị na-ewu ewu Antonio, onye ndị ikwu ya na-agba naanị ụlọ oriri na ọṅụṅụ na Isla de Lobos. N'ọnọdụ ọ bụla, site na ụlọ ọkụ ị nwere echiche dị egwu banyere oke osimiri Atlantic.
Ụlọ oriri na ọṅụṅụ Isla de Lobos
Mgbe ịgagharị n'ụzọ nke agwaetiti ahụ na ịsa ahụ na El Puertito, enwere ihe ọzọ ị nwere ike ime tupu ị nwetaghachi ụgbọ mmiri ahụ. Anyị na-ekwu maka ịnwale gastronomy dị ụtọ nke akụkụ a nke agwaetiti Canary.
Iji mee ya, ị nwere ụlọ oriri na ọṅụṅụ anyị na-ekwu maka ya. N'ebe ahụ ị nwere ike iri nri nnukwu stew, stew nke a na-esi na anụ ewu na akwụkwọ nri mee. Ọ bụ kpọmkwem site na anụmanụ ndị a ka a na-enweta mmiri ara ehi iji mee ka ọ mara mma chiiz sitere na Fuerteventura, nke emere n'ụdị ọdịnala.
N'aka nke ọzọ, nri nke mpaghara ahụ nwere azụ dịka otu n'ime ihe ndị bụ isi. A na-akwado ya n'ọtụtụ ụzọ, mana otu n'ime ihe kacha ụtọ bụ sancocho. Ọ nwere iberibe azụ n'onwe ya na nduku, nduku dị ụtọ, gofio na mojo picón.
Ọ bụ ezie na ọ bụghị nanị na-ahụkarị Fuerteventura, kamakwa nke Canary Islands ndị ọzọ, anyị ga-agwa gị banyere nkwadebe abụọ a anyị kwuru. Nke gofio Ọ bụ ọka chara acha na ntụ ọka wit dị puree. N'akụkụ nke ya, oseose mojo Ọ bụ ihendori e ji galik, nnu, mmanụ na ose mee. Ọ nwere ike ịbụ ọbara ọbara ma ọ bụ akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ dabere na agba nke ihe ikpeazụ. Ọ na-eje ozi dị ka ihe mgbakwunye na ọtụtụ efere, ma, karịa ihe niile, na ndeturu nduku.
Maka desserts, anyị na-adụ ọdụ ka ị gbalịa frangollo. Ọ bụ flan e ji àkwá, shuga, mmiri ara ehi, ntụ ọka na mịrị amị mee. N'ikpeazụ, ị nwere ike iji a obere ogige. Ọ bụ kọfị na-esonyere ya na mmiri ara ehi condensed, ụfọdụ mmanya, cinnamon na lemon.
Ndụmọdụ maka njem gaa Isla de Lobos
Iji mechaa njegharị anyị na-enye gị na gburugburu Isla de Lobos, anyị ga-enye gị ndụmọdụ ka ị buru ha n'uche tupu ị gaa ebe anwansi a. Na mbụ, ị ga-enweta ikike ka ị nwee ike ime ya.
Ma, na mgbakwunye, ozugbo ị nọ n'àgwàetiti ahụ, ọ dị mkpa ka ị kwanyere ihe ịrịba ama na iwu ndị achọrọ na ya. Cheta na ọ bụ a oghere echekwara ma ị ga-atụnye ụtụ n'ichekwa ya.
Dịka ọmụmaatụ, amachibidoro ịga ije na mpụga ụzọ enyere ikike, gbaa ọkụ ma ọ bụ ịchụ nta. Mana ị nweghị ike ịnakọta ihe ndị dị ndụ ma ọ bụ ihe nketa. N'otu aka ahụ, ịnweghị ike iburu anụ ụlọ gị ma ọ bụ lie ihe mkpofu.
Kama nke ahụ, A na-anabata ịkụ azụ, mana ọ bụ naanị na mpaghara ahapụtara. Ị nwere ike na-eme ya ma n'ụdị egwuregwu ya ma na azụ azụ shellfish dabara adaba maka azụ. Kpọmkwem, mpaghara ụsọ osimiri ebe a na-anabata ịkụ azụ bụ nke na-aga site na Los Roques del Puertito ruo Punta El Marrajo.
A na-atụ aro ka ị weta ọtụtụ nri na ihe ọṅụṅụ, yana akpụkpọ ụkwụ dị mma iji na-agagharị n'àgwàetiti ahụ. Ọzọkwa, weta ude nchebe anyanwụ. Ihu igwe na-enye oke okpomọkụ, mana ọtụtụ awa nke anyanwụ na ị nwere ike gbaa onwe gị ọkụ.
N'ikpeazụ, anyị atụpụtara ihe niile ihe ị ga-eme na Isla de Lobos. Ọ bụ ọmarịcha ebe site na okike ya, mana ọ bụkwa otu n'ime agwaetiti Canary kacha nta ama ama. Ọ bụrụ na ị ga-eme njem Fuerteventura ma ọ bụ Lanzarote, echefula ileta ya. Ọ ga-ewe naanị awa ole na ole ma ị gaghị akwa ụta ime ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways » Ihe ị ga-eme na Isla de Lobos